KASHIFAAD: Garry Neville oo shaaca ka qaaday sababtii rasmiga ahayd ee uu Cristiano Ronaldo uga tagay Kooxda Manchester United – Gool FM
(Manchester) 03 Abril 2019. Difaacii hore ee Manchester United, Garry Neville ayaa qiray inaysan safka kooxda layaabin go’aankii uu Cristiano Ronaldo kaga tagay garoonka Old Trafford.
Neville ayaa shaaca ka qaaday dhibaatadii ugu waynayd ee Ronaldo ku qasabtay ka tagista Man United inay ahayd cimillada dalka Ingiriiska.
Kabtanka Portugal ayaa 2009-kii ugu biiray Real Madrid adduun lacageed dhan 80 milyan oo gini, isagoo ku noqday saxiixii ugu qaalisanaa kubadda cagta xilligaas.
Neville ayaa xaqiijiyay in ciyaartoyda Red Devils ay isu diyaariyeen la’aanta laacibka Juventus hadda ka tirsan, maadaama uu isaga doonayay cimilada qorraxda u badan ee dalka Spain.
Difaacii hore ee Ingiriiska ayaa Sky Sports u sheegay inuusan wax badan isku dayin in Ronaldo uu kala hadlo sii joogista naadiga, waxaana uu sii raaciyay in CR7 ay ka go’neyd u dhaqaaqista dalka Spain.
“Wax badan Ronaldo ma aanan kala hadlin inuu sii joogo, cimillada ayaa ahayd dhibka ugu badan ee uu qabay.” ayuu Neville u sheegay Sky Sports.
“Waxay ila tahay inuu si cad u rabay ku noollaashaha Spain iyo inuu La Liga ka ciyaaro, balse jawiga ayaa ugu dhib badanaa, safarkiisa hore ayuu u sii go’aansaday.” ayuu hadalkiisa ku daray Kabtankii hore ee Kooxda Manchester United.
Cristiano Ronaldo ayaa sanaddii 2003 Manchester United kaga soo biiray kooxda Sporting Lisbon, lix sano oo uu ku sugnaa Old Trafford waxa uu kula guuleystay koobab badan oo ay ka mid yihiin horyaalka Ingiriiska iyo tartanka Champions League, ugu dambeytiina sanadkii 2009 ayuu u hayaamay Kooxda Real Madrid.
Dowladda Ingiriiska oo soo faro-gelisay khilaafkii mushahar dhimista ee ka dhex jiray Kooxaha Premier League iyo Xiddigahooda